Accueil > Gazetin'ny nosy > Tranom-panjakana: Noho ny tsikombakomba dia lasan’ny Televiziona “Dream’in”
Tranom-panjakana: Noho ny tsikombakomba dia lasan’ny Televiziona “Dream’in”
Moa tsy isan’ny tranom-panjakana tokony nohajariana mba hampidi-bola amin’ny fanjakana ny efi-trano filanonana (Grande Amphithéâtre) etsy amin’ny Complexe Scolaire Ampefiloha? Latsaka kely noho ny Ivon-toerana fandraisana fivoriana iraisam-pirenena (Cci) eny Ivato izy io. Saika lasa toeram-pametrahana entana fotsiny anefa izany tato aoriana. Amin’izao fotoana dia lasan’ny orin’asa akaikin-dRajaonarimampianina, amin’ny alalan’ny haino aman-jery “Dream’in” io efitrano filanonana goavana io. Dia velom-panontaniana ny maro hoe “inona no fepetra nahatonga izany?” Mba nisy antso tolo-barotra ve sa vitan’ny kiantrano an-trano ?
Tamin’ny fitondrana Repoblika voalohany no nahavitana io fotodrafitrasa io ary nomen’ny fitondrana tamin‘ izany ho an’ny ministeran’ny Fanabeazam-pirenena izy io ka ny minisitra Paul Rabary misahana ny fanabeazam-pirenena ve izany no nitsikombakomba nanome azy io ho an’ny haino aman-jery “Dream’in” ?
Re fa tsy ankasitrahan’ny ministeran’ny Fampianarana teknika sy ny ministeran’ny Fampianarana ambony izao nanomezana ny efitrano lehibe filanonana eny Ampefiloha ho an’ny sehatra tsy miankina izao.
Etsy ankilany, nisy taratasy nalefan’ny sekretaria jeneralin’ny fiadidiana ny Repoblika, izay manaisotra an’ireo rehetra miasa ao amin’ilay tranobe (bâtiment) misy ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy (Cfm) amin’izao fotoana. Homeny manontolo ho toeram-piasan’ity Komity “Cfm” ity izy io, hoy ny akom-baovao. Saika birao iasan’ny antokon-draharaha maromaro eo anivon’ny fampianarana mantsy ny ao amin’izao fotoana. Re anefa fa lavin’ny minisitra Paul Rabary izany. Satria nahoana ? Ao raha !